ကျမ စိတ်တွေ ယိမ်းနေပြီ – Hlataw.com
ကျွန်တော်ဆေးရုံကအိမ်အပြန်လမ်းမှာကျွန်တော်ရင်ထဲမှာပျော်ရွှင်ခြင်တွေပြည့်နက်နေသည် ဘာကြောင့်ဆိုကျွန်တော်အလုပ်ထဲတွင်ထိခိုက်မှုဖြစ်ပြီးဆေးရုံတတ်နေခဲ့သည်မှာတစ်လခန့်ကြာမြင့်နေပြီဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်ကိုအရမ်းချစ်သောကျွန်တော့်မိန်းမဆု တော့သူ့ညီမလင်မယားပျော်ပွဲစားသွားသောကြောင့် အိမ်စောင့်ပေးရန်သူ၏ဇာတိသို့သွာမည်ဟုပြောသွားသည်။် သို့သော်ယနေ့တွင်သူပြန်လာမည့်နေဖြစ်သည့် အတွက်ရင်ခုန်မှုများရင်ချစ်ဇနီးလေးကိုစောင့်နေမိသည်။ အိမ်ပြန်ရောက်ပြီးချစ်ဇနီးလေးကိုလွမ်းနေသောကြောင့် ဖုန်းဆက်လိုက်သည်။တူး..တူး..တူး.. တူး…တူး..တူး….လူကြီးမင်းခေါ်ဆိုသောတယ်လီဖုန်းမှာ… လမ်းမှာမို့ဖုန်းသံမကြားတာလားမသိဘူး ထပ်ခေါ်ကြည့်ဦးမှ လူကတင်းနေပြီလေ မလိုးရတာကြာလှပြီကိုး တူး..တူး..တူ… ဟယ်လို…. မောနေတဲ့အသံနဲ့ဖြေလိုက်တဲ့ ဆုသံလေးကြားလိုက်သည် ဟယ်လိုဆု ပြန်လာနေပြီလား ကိုတော့အိမ်ပြန်ရောက်နေပြီ မိန်းမကိုလွမ်းနေပြီကွ ဘယ်ရောက်နေပြီလဲဟင်ကျွန်တော်ဆက်တိုက်ပြောလိုက်သည် ။ပြောနေရင်းတွင်သူဘက်ကအသံတသံထူးဆန်းစွာကြားလိုက်သည်။
အား. ရင်တစ်ခုလုံးပူနေပေမဲ့သူမဘက်ကအဖြေလေးကိုစောင့်နေမိတယ် ကို ဆုကိုခွင့်လွတ်ပါနော် မဖြစ်သင့်ပေမဲ့ သွေးသားရဲ့ဆန္ဒကိုလိုက်မိသွားတယ်ဆုတောင်းပန်ပါတယ်နော် ကျွန်တော့်ရင်တစ်ခုလုံးကွဲကြေသွားတယ်ဗျာ ဆု ဘာပြောတာလဲဟင် ဆုထိုချိန် အာ့….အား. ကိုသိချင်ရင် ဆု့ရဲ့စာအုပ်လေးကိုရှာပြီး ဖက်လိုက်နော် ဆု့မအားလို့ ဒါပဲနော် ဆု ဆု ဆု တူး…..ကျွန်တော့်ကမ္ဘာကြီးမှောင်မိုက်သွားတယ်ဗျာ ကျွန်တော့်ကိုအရမ်းချစ်တဲ့ဇနီးလေး ဘယ်လိုဖြစ်သွားတာလဲ ကျွန်တော်မရှိတဲ့အချိန် ဆု့ဘာတွေဖြစ်ခဲ့တာလဲ ကျွန်တော်စဉ်းစားရင်းရင်ထဲမှာစို့ရင်ပြီးငိုချလိုက်မိသည်။
လုပ်ရက်လေးခြင်းဆုရယ် ဆုပြောတဲ့စာအုပ်ဘယ်မှာလဲ ကျွန်တော်စာအုပ်ကိုအသဲသန်လိုက်ရှာလိုက်သည်။ ကြာကြာမရှာလိုက်ရပါဘူးစာအုပ်ကိုတန်းတွေ့သည်။ ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်တူပျော်ခဲ့ဘူးတဲ့ခုတင်ဘေး ကစားပွဲပေါ်တွင်တင်ထားသည်ကိုတွေ့လိုက်ရသည်။ ကျွန်တော်စာအုပ်ကိုအသဲအသန်လှန်၍ဖက်လိုက်သည်။ စာအုပ်ထဲတွင် ကိုအလုပ်ကပြန်လာကိုစောင့်နေသောညနေချင်းတစ်ခုတွင်ကိုတို့အလုပ်မှဖုန်းဝင်လာသည်။ ကိုအလုပ်မှာမတော်တစဖြစ်ပြီးဆေးရုံရောက်နေပြီဟူသောစကားဖြစ်သည် ။ဆေးရုံကိုအပြေးလိုက်သွားခဲ့သည် ။ဆေးရုံတွင်တော့ကိုကတော့မေ့နေဆဲဖြစ်သည် ။ဆေးရုံစရိတ်မည်ကဲ့သို့ ရှာရမယ်ကိုတွေးရင် ကျမလေးလံသောခြေလှမ်းများဖြင့်အိမ်သို့ပြန်လာခဲ့သည် ။နောက်ဆုံးတွင်ကျမဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုချလိုက်သည်။ ကိုတို့အလုပ်ရှင် ဦးရန်နိုင်ထံတွင်အကူညီတောင်းရန်ဖြစ်သည်။ကျမသူ့စီကိုဖုန်းဆက်လိုက်သည်။ ဟယ်လိုတစ်ဖက်မှစကားပြောသံကိုကြားလိုက်ရသည်။အသံတွေတုန်ရီစွာဖြင့်ကျမပြန်ပြောလိုက်မိသည်။ဟယ်လို ဦးရန်နိုင်ဟုတ်ပါသလားရှင် ဟုတ်ပါတယ် ဘယ်သူလဲမသိဘူး ကျမကိုအောင်အောင်ရဲ့မိန်းမဆုပါ ကိုအောင်အောင်ဆေးရုံစရိတ်ခက်ခဲနေလို့ အကူညီလှမ်းတောင်းတာပါ ကျမပြန်ပြီးကျေးဇူးဆပ်ပါ့မယ် အခက်ခဖြစ်နေလို့ပါ ဟားဟားဒီလိုလား မင်းငါပြောတာကိုလက်ခံရင် ကူညီမယ်လေ ဟုတ်ပြောပါရှင် မင်းငါနဲ့တစ်လအတူတူနေပေးနိုင်ရင် မင်းလိုချင်တဲ့ငွေကို ငါပေးမယ် ဘယ်လိုလဲ ရှင် ကျမဘာပြန်ပြောရမလဲမသိတော့ပဲကျောက်ရုပ်တစ်ခုလိုငြိမ်သက်စွာရပ်နေလိုက်မိသည်။
တစ်ဖက်မှစကားဆက်ပြောပြီးဖုန်းကိုချသွားသည်။ မင်းငါ့ရဲ့ကမ်းလှမ်းချက်ကိုလက်ခံရင်မနက်ဖြန်ငါ့ရုံးခန်းကိုလာခဲ့လေ အဲ့ဒီတော့မှဆက်ပြောကြတာပေါ့ ကျမတညလုံးစဉ်းစားပြီးဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကိုချလိုက်သည်။ ကိုရယ်ဆုကိုခွင့်လွတ်ပါတော့နော်ရုံးခန်းထဲတွင် …မင်းငါ့ရဲ့ကမ်းလှမ်းချက်ကိုလက်ခံတယ်ပေါ့ ဟုတ် ကျမခေါ်ကိုငုံထားရင်ဖြေလိုက်သည်။သေချာတယ်နော် မင်းငါ့ဘေးမှာတစ်လတိတိနေပေးရမှာမင်းလုပ်နိုင်ပါတယ်နော် ဟုတ် ဟုတ်ကဲ့ ဒါပေမဲ့ဒီကိစ္စကိုကျမယောက်ျားမသိပါစေနဲ့နော် စိတ်ချပါ မင်းယောက်ျားဆေးရုံစရိတ်ကို ငါတာဝန်ယူတယ် ရော့ခုမင်းသုံးဖို့၁၀သိန်း မနက်ဖြန်ကစပြီးမင်းငါနဲ့တူတူနေရမယ်ဟုတ် ဟုတ်ကဲ့စာအုပ်ကိုဖက်ရင်ကျွန်တော့်ရင်တွေကွဲကြေနေပြီဖြစ်သည်။ ဆုရယ် အဲ့လောက်လုပ်ဖို့လိုလို့လားကွာ ကျွန်တော်မဖက်ရဲပေမယ့်စာအုပ်ကိုဆက်ဖက်လိုက်သည်။ ကျမလေးလံသောခြေလှမ်းများဖြင့်အိမ်သို့ပြန်လာခဲ့သည်။ ကျမကို့အပေါ်ကိုအမှားလုပ်မိနေပြီးလား ကိုသိရင်ရောငါ့ကိုခွင့်လွတ်ပါ့မလား သူမသိလောက်ပါဘူးငါမပြောရင်ကိုသိစရာအကြောင်းမရှိပါဘူး ကို့ကိုဆုအရမ်းချစ်ပါတယ် ကို့အတွက်ပါကိုရယ်ကျမအတွေးနယ်ချဲ့ရင်းမနက်သိုရောက်ရှိသွားသည်။ မနက်ဆေးရုံသိုရောက်တော့ကိုသတိရနေပြီ။ ကို့ဆေးရုံစရိတ်အတွက် ကျမအလုပ်လုပ်မယ်စိတ်မပူပါနဲ့လို့ပြောရင်းကို့စီကနေပြန်ခဲ့သည်။ ဆေးရုံမှအပြန်ဦးရန်နိုင်ပေးသောလိပ်စာအတိုင်းကျမအလုပ်လုပ်ရန်ထွက်လာခဲ့သည်။
ဦးရန်နိုင်အိမ်သို့ရောက်သော် မင်းရောက်လာပြီလား လာထိုင်လေ သူခေါ်ဆောင်နောက်ကိုလိုက်ခဲ့သည်။ ဧည့်ခန်းတွင်အပြာကားတစ်ကြားကိုဖွင့်ထားလျှက်ရှိသည်။ သူနှင့်အတူကျမမကြည့်ရဲပေမဲ့ကြည့်နေမိခဲ့သည်။ သူ့စီကစကားပြောသံတစ်ချက်ကြားလိုက်ရသည်။ဘယ်လိုလဲဆု ဇာတ်လမ်းကကောင်းတယ်မို့လား မိန်းမကောင်းတစ်ယောက် တဖြေးဖြေးနဲ့ ယောက်ျားတစ်ယောက်နဲ့လိုးရတာကို နှစ်သက်သွားတယ် မင်းလဲအလိုပဖြစ်လာမှာပါ ကျမဘယ်တော့မှကျမယောက်ျားအပေါ်သစ္စာမဖောက်ဘူး ခုလိုလုပ်နေရတာလဲခြေနေတစ်ခုကြောင့်ပါ ကျမဘယ်တော့မှအလိုဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူး ဟားဟား သေချာလှချည်လား အေးပေါ့ စောင့်ကြည့်တာပေါ့ကွာသူကစကားပြောရင်းကျမနားကိုကပ်လာပြီးကျမရဲ့နို့ကိုအပေါ်ကနေဖိပွတ်နေသည်။ မထင်မှတ်ထားတဲ့အချိန်မှာကျမနှုတ်ခမ်းလေးကိုနမ်းတာခံလိုက်ရသည် ။ယောက်ျားနှင့်အတူနေဖူးသော်လဲခုလိုတစ်စိတ်ယောက်နှင့်နေရမယ်ဆိုတော့ကျမကြောက်နေမိသည်။
သူအနမ်းတွေကကျမကိုရင်ခုန်စေသည်။ နမ်းတာကိုခဏရပ်ပြီးကျမကိုအင်္ကျီကိုချွတ်လိုက်သည်။ တဆက်ထဲကျမဘရာကိုပါချွတ်လိုက်ပြီးကျမနိုးလေးကိုစို့နေသည် ။အား..အား… လက်တစ်ဖက်က ကျမရဲ့နို့တစ်ဖက်ကိုကိုင်ရင်းစို့နေသည်။ ကျမရဲ့နို့လေးတွေလျှာလေးနဲ့စို့ရင်း ကစားနေတော့ကျစိတ်တွေလွှင့်ပျယ်လာသည်။ ကျမယောက်ျားသည်ပင်ထိုသို့လုပ်မပေးဘူးပေ။အား.အား. သူ့လက်ကကျမနို့ပေါ် မှအောက်သို့ဆင်းသွားပြီးကျမပင်တီရဲ့အပေါ်ကနေပွတ်ပေးနေသည်။ ကျမရဲ့စောက်ဖုတ်လေးမှာလဲသူ့ရဲ့နိုးစွမှုကြောင့်အရေတွေစိုနေပြီဖြစ်သည်။ ကျမလဲသူ့ကိုဖက်ပြီးသူလုပ်သမျှကိုခံနေမိသည်။ အား..အား……ကျမရဲ့နို့တွေကိုစို့နေရာမှအောက်ကိုဆင်းသွားသည်။ ထိုနောက်ကျမရဲ့စောက်ဖုတ်လေးကိုနမ်းတာခံလိုက်ရသည်။ ဘာတွေလုပ်နေတာလဲရှင် မသင့်တော်ပါဘူး မင်းယောက်ျားကမင်းကိုဒီလိုနမ်းမပေးဘူးလားဟင့်အင်း ကျမမခံတတ်ဘူးဟားဟား နောက်တော့ခံတတ်သွားမှာပါသူကပြောပြီးတာနဲ့ကျမစောက်ဖုတ်လေးကိုဖြဲပြီးအစ်လေးကိုစုပ်ယူလိုက်သည်။
ကျမတစ်ကိုယ်လုံးကျင်တတ်သွားသည်။မျိုးမည်မသိတဲ့ခံစားမှုကိုကျမရလိုက်သည်။ အား..အား. ဘယ်လိုတွေလုပ်နေတာလဲရှင် မင်းကောင်းနေပြီမို့လား ကဲငါမင်းကိုလိုးတော့မယ် ထိုသို့ပြောပြီးသူ၏ဘောင်ဘီကိုချွတ်ချလိုက်ရာကျမမျက်လုံးပြူးသွားသည်။ သူလီးကြီးသည် ကျမယောက်ျားထက်နှစ်ဆလောက်ပိုကြီးသည်။ သူ့လီးကြီးသည်အကြောများပြိုင်းထနေသည်။ ဘယ်လိုလဲ မင်းယောက်ျားလီးကငါ့လောက်ရှိလားဟင့်အင်း မရှိမရှိပါဘူးရှင်အတာဆိုရင်ရင်တော့ မင်းစောက်ဖုတ်လေးကကြပ်နေမှာပဲ ကဲမင်းစောက်ဖုတ်လေးကို လိုးတော့မယ်ကွာ ပြောရင်းဖြင့်ကျမပေါင်ကိုကားပြီးနေရာဝင်ယူလိုက်သည်။ ထိုနောက်သူ့လီးဒစ်ကြီးဖြင့် ကျမစောက်စိလေးကိုပွတ်ပေးနေသည်။ မလုပ်မလုပ်ပါနဲ့ရှင် ကျမမနေနိုင်လို့ပါ သူ့လီးကိုကျမစောက်ဖုတ်လေးထဲကိုထို့စိုက်လိုက်သည်။ လီးကြီးဝင်လာတာနှင့် ကျမစောက်ဖုတ်လေးတစ်ခုလုံးပြည့်ကြပ်သွားသည်။ မင်းယောက်ျားကမင်းကိုအမြဲမလိုးဘူးလား မင်းစောက်ဖုတ်လေးကအပျိုလေးတိုင်းပဲကွာ သူ့လီးကြီးကိုကျမစောက်ဖုတ်ထဲကို အဆုံးထိသွင်းလိုက်သည်။ကျမအလွန်အောင့်သွားသည။် ကျမသားအိမ်ထိကိုထိသွားသည်။ မင်းစောက်ဖုတ်ကြီးကငါ့လီကိုဆွဲညစ်နေတယ် ကောင်းလိုက်တာကွာ ဘယ်လိုလဲ မင်းခံလို့ကောင်းနေပြီလား မကောင်းဘူးမကောင်းဘူး မင်းယောက်ျားကိုနောက်ဆိုမေ့သွားမှာပါကွ သူကပြောနေရင်းကျမကိုဆောင့်ဆောင့်လိုးနေသည်။
အား….အား…. ဗြစ်.ဗြစ်..ဗြစ်…. အား… ပြွတ်.ပြွတ်.ပြွတ် အခန်းထဲတွင်လီးနဲ့စောက်ဖုတ်ရိုက်သံများ လွမ်းခြုံနေသည်။ ကျမစောက်ဖုတ်ထဲကအရေတွေကြောင့်အသံတွေပိုထွက်နေသည်။ ကျမမသိစိတ်ကြောင့်ကျမအောက်နေပင့်ပြီးပြန်စောင့်နေမိသည်။အား..အာ…. ပြွတ်…ပြွတ်.. ကောင်းလားဆု မင်းစောက်ဖုတ်ကြီးကို မင်းယောက်ျားမဟုတ်တဲ့ ငါလိုးနေပြီကောင်းလားအား..အာ…… ပြွတ်….ပြွတ်…..ပြွတ်. အား….အာ….. ဗြွတ်…..ဗြွတ်…..ဗြွတ်ကျမသူ့လိုးချက်တွေနဲ့လိုက်ပြီးပြန်ဆောင့်နေမိသည်။ တကယ်တော့ကျမတစ်ကယ်အရမ်းကောင်းနေပြီဖြစ်သည်။သူ့လိုးချက်တွေကအရမ်းကောင်းလှသည်။
ကျမယောက်ျားနှင့်နေတုန်းကခုလို့အရသာမျိုးတခါမှမခံစားဘူးပါ။ ခွင့်လွတ်ပါယောက်ျားရယ် အား…အား…မင်းဘယ်လိုနေလဲငါသိတယ်နော် မင်းကောင်းနေပြီမို့လားအား.အား… အင့် မကောင်းဘူး.မဟုတ်ဘူး မဟုတ်ဘူးကျမပါစပ်ကသာငြင်းနေသော်လဲလီးရဲ့အရသာ အီစိမ့်နေပြီဖင်ကြီးကိုကော့ကော့ပြီးပြန်ဆောင့်ကာနေမိသည်။ အရမ်းလိုးလို့ကောင်းတာပဲဆုရယ် မင်းစောက်ဖုတ်ကကြပ်ပြီး မင်းဖင်ကြီးကပြန်ပြန်ဆောင့်နေတယ်ဟင့်အင်း အား…အာ.. ပြွတ်….ပြွတ်…ဦးရန်နိုင်ကလီးကြီးကိုစွဲထုပ်လိုက်သည်။ ထိုနောက်ကျမကိုပွေ့ချည်ကာအိပ့်ခန်းထဲသို့ခေါ်ဆောင်လာသည်။
အိပ့်ခန်းသို့ရောက်သော် ဆုကုတင်ပေါ်ကိုလေးဖက်ထောက်ကုန်းလိုက်မင်းယောက်ျားကိုပါမေ့သွားအောင် ငါလိုးပေးမယ် ကျမသူ့ပြောတဲ့အတိုင်းကုန်းပေးလိုက်သည် ။နောက်သို့ပြူးထွက်နေသော ကျမစောက်ဖုတ်ကြီးကိုဖြဲကာသူ့လီးကိုထည့်လိုက်သည်။အား.အား…. နာတယ် နာတယ် ထိုအခါသူကလီးကြီးကိုပြန်နှုတ်ပြီးကျမစောက်ဖုတ်ကြီးကိုဖဲကာလျှာလေးဖြင့်ကလိပေးသည်။ ကျမတကိုယ်လုံးတွန့်တွန့်လူးနေတော့သည်။အမှန်တိုင်းပြောရရင်ကျမဒီအရသာကိုနှစ်သက်မိနေသည်။ မင်းခံနိုင်ပြီဆိုရင်ဆက်လိုးတော့မယ် မင်းယောက်ျားလိုးလိုမမြဲတဲ့ဖုတ်ကြီးကို ငါပြဲနေအောင်လိုးပြမယ် မင်းငါ့ကိုကြိုက်သွားမှာပါ ပြောပြီးသည်နှင့်လီးကိုတဆုံးထည့်ကာဆောင့်ဆောင့်လိုးသည်။ ကျမကုတင်ရှေ့သိုဆောင့်လိုက်တိုင်းစိုက်စိုက်ကျလာသည်။အား. အား. မင်းစောက်ဖုတ်ကြီးကိုကြိုက်သွားပြီး ငါလိုးတာကောင်းလာဆုပြွတ်….ပြွတ်.. ဗြွတ်..ဗြွတ်…အားပြင်းပြင်းဖြင့်စောင့်ကာလိုးနေသည်။ ကျမလည်းအရမ်းကောင်းပြီးပြီးသွားသည်။ ဦးရန်နိုင်လဲခပ်ကြမ်းကြမ်းဆောင့်လိုးရင်းပြီးသွားသည်။ ထိုနောက်ကျမလဲကုတင်ပေါ်တွင်မျော့ကာအိပ့်ပျော်သွားတော့သည်။ နောက်တစ်နေ့မနက်ဘယ်လိုလဲ ငါနဲ့အလိုးခံရတာကောင်းတယ်မို့လား မင်းစောက်ဖုတ်ကလဲအရည်ကိုရွှဲနေတာပဲ အရမ်းလိုးလို့ကောင်းတာပဲ ဒါဟာအိမ်က်ဆိုးတွေပဖြစ်ပါစေလို့ကျမဆုတောင်းနေမိသည်။ ကျမအဖြစ်ကိုကျမယောက်ကျားသာသိရင်ခွင့်လွတ်ပါ့မလားလို့လဲတွေးနေမိသည်။
ကဲကဲ မင်းယောက်ျားဆေးရုံကိုသွားမှာဖြင့်သွား နေ့လည်တော့ပြန်လာခဲ့နော် ဆေးရုံသိုရောက်သော် ဆုအရမ်းပင်ပန်းနေတာလား ဆုမျက်နာလေးချောင်ကျသွားတယ် ဆုရယ် ဆုလုပ်နေတဲ့အလုပ်ကိုဆက်မလုပ်ပါနဲ့တော့လားမပင်ပန်းပါဘူးကိုရယ် ညကအင်တာနက်သုံးတာများသွားလို့ အိပ့်ရေးမဝဖြစ်နေတာပါဟုတ်လား အင်တာနက်ထဲကဘာတွေကြည့်နေတာလဲ အောကားလားဟင် ကိုနော် အလိုမဟုတ်ပါဘူး…ကျမအောကားကြည့်တာမဟုတ်ပဲအောကားရိုက်နေတဲ့အဖြစ်ကို ကျမယောက်ျားတော့မသိရှာဘူးဖြစ်သည်။ ကျမယောက်ျားစီမှနေ့လည်ခင်း တွင်အလုပ်လုပ်ရမည်ဟုပြောပြီးပြန်လာခဲ့လိုက်သည်။ အိမ်ရောက်သည်နှင့် ဦးရန်နိုင်ကအသင့်စောင့်ကြိုနေသည်။အရက်သောက်ရင်း ကျင်စက် မျိုးစုံနှင့်စောင့်ကြိုနေသည်။ မင်းပြန်လာပြီလား လာလေ မင်းကိုငါခုလေ့ကျင့်ပေးမလို့ ကျမသူနားရောက်သည်နှင့်အရက်ခွက်တစ်ခွက်ကိုကမ်းပေးသည်။ ထိုနောက်အရက်ခွက်ကိုငှဲ့ပြီးသူကဆက်လက်သောက်နေသည်။ ကျမကိုအတင်းဇွတ်ကိုကနေသောကြောင့်သူနဲ့အတူအရက်သောက်လိုက်သည်။ ပြွတ်… အွင့်…..ကျမနှုတ်ခမ်းကိုစုပ်နမ်းတာခံလိုက်ရသည်။ ကျမသည်လဲအရက်အရှိန်ကြောင့် သူ့အနမ်းတွေကိုပြန်တုန့်ပြန်နေမိသည်။ပြွတ်…. ပြွတ်…အင်း.. အင်း….မင်းအဝတ်တွေကိုချွတ်လိုက် အကုန်ချွတ်နော် ကျမသူအမိန့်ကိုကျွန်တစ်ယောက်လိုနာခံရင်းအဝတ်တွေချွတ်လိုက်သည်။
ကျမအဝတ်တွေချွတ်ပြီးသူနားကိုပြန်သွားလိုက်သည် ။ရောက်ရောက်ချင်းသူ့လက်ထဲမှာရှိတဲ့ကျင်စက်အသေးလေးနှ င့်ကျနို့တွေကိုပွတ်ပေးတော့သည်။ အား…..အာ….ထိုနောက် ကျမနို့တစ်ဖက်စီကို ကျင်စက်တစ်ခုစီနှင့်ကပ်ပေးထားလိုက်သည်။ ကျမစိတ်တွေအားလုံးလေးထဲတွင်မြောက်နေခဲ့သည်။ ကျမစောက်ဖုတ်ထဲမှစောက်ရည်တွေကလဲလျှံထွက်လာသည်။ သူကကျမစောက်စီလေးကို ငုံစုပ်ပြီးကျမစောက်ဖုတ်ကိုလျှက်နေသည်။ ကျမတခါမှမခံစားဖူးသောကာမအရသာကိုခံစားနေမိပြီဖြစ်သည် ကဲငါ့လီးကိုလဲစုပ်ပေး မလုပ်ပရစေနဲ့ရှင် ကျမတစ်ခါမှမလုပ်ဘူးလို့ပါ ကျမမလုပ်တတ်ဘူး မင်းယောက်ျားကိုစုပ်မပေးဖူးဘူးလားကွ ဒီလိုဆိုတော့လဲသင်ပေးရတာပေါ့ သူကကျမစောက်ဖုတ်တဲ့ကိုလီးတုကျင်စက်ကြီး ထည့်ပေးထားပြီးသူ့လီးကိုကျမပါးစပ်ထဲထိုးထည်ပေးလိုက်သည်။စုပ် သွားနဲ့မခြစ်မိစေနဲ့နော် အေး လျှာလေးနဲ့လီးဒစ်ကိုမွှေပြီးစုပ်ပေးအား…အာ…ကောင်းတယ်ကွာ ကြာကြာမသင်လိုက်ရဘူးပဲကွသူပြောတဲ့အတိုင်းစိတ်ပါပါနဲ့စုပ်နေမိတဲ့ကျမကိုယ်ကျမအံသြမိသွားသည်။ ကျစိတ်တွေသူ့စီယိမ်းနေပြီလားမသိဘူး။မဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူး ကို့ပေါ်ကိုသစ္စာမဖောက်ဘူး ကျမစိတ်ကိုတင်းပြီးဆက်စုပ်နေမိသည်။ ကျမစောက်ဖုတ်ထဲကလဲလီးတုကြီးရဲ့ ထိုးမွှေမှုကြောင့်အရမ်းကြောင်းနေသည်။ ဒီချန်မှာလီးတုထက်ဦးရန်နိုင်ရဲ့လီးကြီးနဲ့လိုးတာကိုပဲခံချင်နေမိသည်။ ဒါပေမဲ့ကျမမိန်းမကောင်းပီပီမတောင်းဆိုခဲ့ပါဘူး။ အား….ငါပြီးတော့မယ် မြန်မြန်စုပ်စမ်း အား….အား…. အွင့်…..အွင့် ပြွတ်…ပြွတ်သူကကျမခေါင်းကိုကိုင်းအတင်းထိုးထဲ့ကာပြီးလိုက်သည်။
သူ့လရေတွေကကျမလည်ချောင်းထဲကိုတန်းဝင်သွားသည်။ ဦးရန်နိုင်ကပြီးသည်နှင် အဝတ်စားများဝတ်ကာအပြင်ထွက်သွားသည်။ကျမအရမ်းလိုးခံခြင်နေသည်။ ဦးရန်နိုင်လိုးမသွားတော့ကျမမနေနိုင်တော့။ သူထည့်ပေးထားသောလီးတုကြီးဖြင့် သူမရှိချိန်ကျမတစ်ယောက်ထဲလိုးနေမိသည်။ အား….အာ…. ကောင်းလိုက်တာ အား…. ဦးရန်နိုင်ရယ် ပြန်လာပြီးလို့လည့်ပါတော့ဆုဖောက်ဖုတ်ကဦးရန်နိုင်လီးကြီးကိုမျော်နေပြီ ကျအသိစိတ်လွတ်ကာဦးရန်နိုင်ကိုတမ်းတရင်းလိုးနေမိသည်။ အား….အား… ကောင်းလိုက်တာ အင့်….အင့်… အရမ်းကောင်းနေပြီလားဆုလေး ငါ့လီးကိုခုတမ်းတနေပြီပေါ့ ငါ့လီးနဲ့မင်းစောက်ဖုတ်ကိုလိုးတာခံချင်ပြီလားဦး…. ဦးရန်နိုင် ကျမအံအားသင့်ကာနောက်သို့လည့်ကြည့်လိုက်မိသည်။ ကျမရဲ့နောက်တွင်ဦးရန်နိုင်ကရပ်ပြီး ကျမရမက်ထန်နေပုံများကိုကြည့်နေသည်။ ကျမစိတ်တွေဦးရန်နိုင်နှင့်တွေမှ ကျမကာမအရသာကိုသိကာရမက်တွေထန်နေခဲ့သည်။ရုံးခန်းထဲတွင် ဖင်ကြီးကိုရမ်းပေးဆု မင်းဖင်းကလိုးလို့ကောင်းတယ်ကွာအ့..အား…ဖြေးဖြေးလုပ်ပါ နာတယ်မင်းအရမ်းကောင်းနေပြီမို့လား နာနေသေးတယ်မင်းဖင်ကလေ့ကျင့်ပေးဖို့ လိုသေးတယ်နောက်ဆိုဖင်ပဲခံချင်နေတော့မှာ အား…..အား….ဖင်ပြီးရင်စောက်ဖုတ်ရောလိုးပေးဦး စောက်ဖုတ်ထဲကအရမ်းယားနေပြီရတာပေါ့ ငါ့လီးအစားလီးတုထည်ပေးမယ်ဒီ ဆိုဒ် အကြီးဆုံးပဲ မင်းစောက်ဖုတ်နဲ့ဆံမှာပါ စောက်ဖုတ်ဖြဲပေးထားမယ် တဆုံးထည့်ပေး ကျမစောက်ဖုတ်ထပြည်ကြပ်သွားတာပဲပြန်ကုန်းပေးတော့ ဖင်ဆက်လိုးမယ်အား..အာ. ကောင်းတယ်.. အာ… ပြွတ်..ပြွတ် ဗြွတ်…ဗြွတ်….ကျမနို့တွေရောဆွဲလိုးပေး အား..ကောင်းတယ်..အာ..ငါပြီးတော့မယ် မင်းဖင်ကြီးနဲ့ပြန်စောင့်ပေးဆု အာ..အာ…ဒီနေ့ဆိုရင်ကျမနဲ့ဦးရန်နိုင်အတူတူနေလာတာ၂ပတ်ပြည့်ပြီဖြစ်သည်။
ကျမနဲ့ဦးရန်နိုင်လဲနေရာပေါင်းစုံမှာပုံစံအမျိုးမျိုးဖြင့်လိုးနေကြပြီဖြစ်သည်။ ကျမအမြင်ထွက်ရင်တောင်မှကျမပင်တီထဲကို ကျင်စက်ထည့်ပေးကာနောက်မှနေ၍လိုက်ဆွလေ့ရှိသည်အထိပင်ဖြစ်သည်။ ကဲငါ့လီးကိုလဲစုပ်ပေး မလုပ်ပရစေနဲ့ရှင် ကျမတစ်ခါမှမလုပ်ဘူးလို့ပါ ကျမမလုပ်တတ်ဘူး မင်းယောက်ျားကိုစုပ်မပေးဖူးဘူးလားကွ ဒီလိုဆိုတော့လဲသင်ပေးရတာပေါ့ သူကကျမစောက်ဖုတ်တဲ့ကိုလီးတုကျင်စက်ကြီး ထည့်ပေးထားပြီးသူ့လီးကိုကျမပါးစပ်ထဲထိုးထည်ပေးလိုက်သည်။စုပ် သွားနဲ့မခြစ်မိစေနဲ့နော် အေး လျှာလေးနဲ့လီးဒစ်ကိုမွှေပြီးစုပ်ပေး အား….အာ….. ကောင်းတယ်ကွာ ကြာကြာမသင်လိုက်ရဘူးပဲကွ သူပြောတဲ့အတိုင်းစိတ်ပါပါနဲ့စုပ်နေမိတဲ့ကျမကိုယ်ကျမအံသြမိသွားသည်။ ကျမစိတ်တွေသူ့စီယိမ်းနေပြီလားမသိဘူး။ မဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူး ကို့ပေါ်ကိုသစ္စာမဖောက်ဘူး ကျမစိတ်ကိုတင်းပြီးဆက်စုပ်နေမိသည်။ ကျမစောက်ဖုတ်ထဲကလဲလီးတုကြီးရဲ့ထိုးမွှေမှုကြောင့်အရမ်းကြောင်းနေသည်။ ဒီချန်မှာလီးတုထက် ဦးရန်နိုင်ရဲ့လီးကြီးနဲ့လိုးတာကိုပဲခံချင်နေမိသည်။ ဒါပေမဲ့ကျမမိန်းမကောင်းပီပီမတောင်းဆိုခဲ့ပါဘူး။ အား……ငါပြီးတော့မယ် မြန်မြန်စုပ်စမ်း အား…..အား…. အွင့်…..အွင့် ပြွတ်…..ပြွတ်သူက ကျမခေါင်းကိုကိုင်းအတင်းထိုးထဲ့ကာပြီးလိုက်သည်။ သူ့လရေတွေကကျမလည်ချောင်းထဲကိုတန်းဝင်သွားသည်။ ဦးရန်နိုင်ကပြီးသည်နှင် အဝတ်စားများဝတ်ကာ အပြင်ထွက်သွားသည်။ကျမအရမ်းလိုးခံခြင်နေသည်။ ဦးရန်နိုင်လိုးမသွားတော့ကျမမနေနိုင်တော့။ သူထည့်ပေးထားသော လီးတုကြီးဖြင့်သူမရှိချိန်ကျမတစ်ယောက်ထဲလိုးနေမိသည်။
အား….အာ…. ကောင်းလိုက်တာအား… ဦးရန်နိုင်ရယ် ပြန်လာပြီးလို့လည့်ပါတော့ ဆုဖောက်ဖုတ်ကဦးရန်နိုင်လီးကြီးကိုမျော်နေပြီ ကျအသိစိတ်လွတ်ကာ ဦးရန်နိုင်ကိုတမ်းတရင်းလိုးနေမိသည်။ အား…အား….. ကောင်းလိုက်တာ အင့်….အင့်… အရမ်းကောင်းနေပြီလားဆုလေး ငါ့လီးကိုခုတမ်းတနေပြီပေါ့ ငါ့လီးနဲ့မင်းစောက်ဖုတ်ကိုလိုး တာခံချင်ပြီလားဦး….ဦးရန်နိုင် ကျမအံအားသင့်ကာနောက်သို့လည့်ကြည့်လိုက်မိသည်။ ကျမရဲ့နောက်တွင်ဦးရန်နိုင်ကရပ်ပြီးကျမရမက်ထန်နေပုံများကိုကြည့်နေသည်။ ကျမစိတ်တွေဦးရန်နိုင်နှင့်တွေမှကျမကာမအရသာကိုသိကာရမက်တွေထန်နေခဲ့သည်။ဆေးရုံထဲတွင် ကိုသက်သာရဲ့လားဟင် ဆုလဲအလုပ်များနေတာနဲ့ ကို့စီကိုမရောက်ဖြစ်ဘူး သက်သာနေပြီဆုရဲ့နောက်တစ်ပတ်လောက်ဆိုဆင်းရတော့မယ်တဲ့ မြန်မြန်ဆင်းချင်ပြီကွာ ဆုနဲ့တူတူမလိုးရတာလကြာနေပြီလေ ထိုချိန်တွင်ကျမပင်တီထဲမှကျင်စက်ကစတင်တုန်လာသည်။ အခန်းပြင်တွင်ဦးရန်နိုင်ရောက်နေပြီဆိုတာသိလိုက်ရသည်။ ဟေ့အောင်အောင် ဘယ်လိုလဲနေကောင်းနေပြီလားကွ ဟာသူဌေး လာပါဗျာ နေကောင်းနေပါပြီသူဌေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးရဦးမယ် ဒါကကျွန်တော်မိန်းမဆု အော်ဟုတ်လား တွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ် ဟုတ်ကဲ့ရှင့် အာ့ ဘာဖြစ်တာလဲဆုလေးဘာမှမဖြစ်ပါဘူးကိုရယ်ခြေထောက်ခေါက်သွားပါ ကျမဟန်ဆောင်ကာပြောလိုက်သည်။
တကယ်တော့ကျမပင်တီထဲကကျင်စက်အစွမ်းကြောင့်ကျမကာမစိတ်တွေတတ်နေပြီဖြစ်သည်။ ကိုဆုပြန်တော့မယ်လေ နောက်ရက်မှထပ်လာခဲ့မယ် အော် မဆုပြန်တော့မလို့လား ကျွန်တော်လိုက်ပို့မယ်လေ ရပါတယ်သူဌေးရယ် ကျမဘာသာပြန်လိုက်ပါ့မယ် ဆုကလဲလိုက်သွားလိုက်လေ သူဌေးကတကူးတကခေါ်တာကို ဟုတ် ဟုတ်ကဲ့ အင့် ကို့ရှေ့တွင်ကျမတို့နှစ်ယောက်သရုပ်ဆောင်ပြကာပြန်ထွက်ခဲ့လိုက်ကြသည်။အပြင်ရောက်သည်နှင့် ဦး အရမ်းဆိုးတာပဲကွာ သူများယောက်ျားရှေ့မှာ လူကိုမနေနိုင်ဆွတယ် ဆုရဲ့အရှိန်တတ်တဲ့မျက်နာလေးက အရမ်းချစ်ဖို့ကောင်းလို့ပါကွာ ခုတောင်လိုးချင်နေပြီဆုရဲ့ ဦးနော်တစ်ခါလာဒါကြီးပဲ လွန်လွန်းတယ် ခုမှလိုးပြီးထွက်လာတာ ဘယ်လောက်မှကြာတေးတာလဲမဟုတ်ပဲနဲ့ကျမစိတ်တွေဦးရန်နိုင်စီကိုယိမ်းယိုင်သွားခဲ့ပါပြီ။ ဦးရန်နိုင်ပေးတဲ့ကာမအရသာကိုကျမဘယ်လိုမှမငြင်းဆန်နိုင်တော့ပါဘူး။ ခုချိန်ကမစိတ်ထဲတွင် ဦးရန်နိုင်နှင့်လိုးရမည်ဆိုလျှင်အရာရာအားလုံးကိုစွန့်လွတ်ဖို့ဝန်မလေးတော့ပါ။ ဦးရန်နိုင်ရဲ့ကားရှိရာသို့ကျမတို့တူတူရောက်လာကြသည်။ ကားပေါ်သို့ရောက်သည်နှင့် ဦး ဆုမနေနိုင်တော့ဘူးဦးရယ် ကျမကိုလိုးပေးပါတော့နော် ဦးလဲမနေနိုင်တော့ဘူးကွာ ဦးလီးကိုစုပ်ပေးပါဦး ကျမသည်ဦးရန်နိုင်ရဲ့လဒစ်ကိုကြီးကိုကျမနှုတ်ခမ်းလေးဖြင့်ဖွဖွလေးငုံစုပ်လိုက်သည်။
ပြွတ်…..ပြွတ်…. အွင့်….အွင့်.ကောင်းလိုက်ဆုရယ် မင်းစောက်ဖုတ်ကြီးကလဲပြဲလာပြီနော် ဦးရန်နိုင်သည်ကျမစောက်ဖုတ်ထဲကိုလက်ဖြင့်ကလိရင်းလီးစုပ်ခံနေသည်။ပြဲမှာပေါ့လို့ သူများယောက်ျားတောင် တစ်ပတ်တခါပဲလိုးတဲ့စောက်ဖုတ်ကိုဦးကအချိန်တိုင်းလိုးနေတာလေ ဘာလဲဦးကပြဲသွားတော့မလိုးချင်တော့ဘူးလား ဟားဟား မဟုတ်ပါဘူးဆုရယ်မင်းစောက်ဖုတ်ကပြဲနေလဲလိုးလိုအရမ်းကောင်းတယ် မင်းစောက်ဖုတ်ကဆွဲဆွဲစုပ်နေတဲ့မျှော့ကအရမ်းကောင်းတယ် ကောင်းရင်လဲလိုးတော့မယ်ဦးလီးကြီးထောင်ထားပေး ဆုပေါ်ကတတ်ဆောင့်ပေးမယ်အား.အား.. ကောင်းလိုက်တာဦးရယ်ဦးလီးကဝင်တာနဲ့တင်အရမ်းကောင်တာ ဦးလီကတုတ်တေါ့စောက်ဖုတ်ထဲကိုပြည့်ကြပ်နေတာပဲအား…အာ…. ဗြစ်….. ပြွတ်… အား.. အွင့် အွင့်ကျမတို့နှစ်ယောက်ကားထဲတွင်သောင်းကြမ်းနေကြသည်။ ကျမယောက်ျားရှိသောနေရြာ ဖစ်သောကြောင့်ရင်တွေခုန်ကာ ကျမစောက်ဖုတ်ကြီး ကလဲယွကာအရမ်းခံလို့ကောင်းနေသည်။ ခုဆိုရင်ကျမယောက်ျားကိုချစ်ပဲချစ်တော့သည်။ ခုတော့ကျမကာမဆက်ဆံမှုကိုပဲပိုနှစ်သက်နေတော့သည်။ ဦးရန်နိုင်အလိုးကိုပဲအမြဲခံချင်နေတော့သည်။ဆု ဦးဖင်လိုးချင်တယ်ကွာ ဖင်နဲ့တတ်စောင့်ပေး အတာဆို ဦးလက်နဲ့စောက်ဖုတ်နဲ့နို့ကိုပွတ်ပေးနော် လုပ်ပေးမှာပေါ့ဆုလေးရဲ့ မင်းစောက်စိလေးကိုပွတ်ပေးမယ်နော် မင်းဖင်ကိုလဲပိုးဆိုးပတ်ဆက်လိုးပေးမယ် လိုးပေးနော်အရမ်းခံချင်လှပြီ အာ့… အား…. ပြွတ်….ပြွတ်…..အွင့်… အွင့်ခုဆိုရင်ကျမဖင်ကိုဘယ်လိုလိုးလိုးခံနိုင်နေပြီဖြစ်သည်။
ကျမယောက်ျားဖင်လိုးဖို့တောင်းဆိုတုန်းကတော့ခွင့်မပြုခဲ့ပါဘူး။ ခုတော့ဖင်လိုးခံရတာကိုအရမ်းကြိုက်နေပြီဖြစ်သည်။ ဦးရန်နိုင်ရဲ့လီးကြီးနဲ့လိုးပေးတာဟာတကယ်နတ်စည်းစိမ်တစ်ခုပင်ဖြစ်သည်။အား..အား. စောက်ဖုတ်ကိုပွတ်ပေးဦး ဆုပြီးတော့မယ်အား… ကျမဖင်နဲ့တတ်ဆောင့်ရင်းတစ်ချီပြီးသွားပြီးဖြစ်သည်။ ကျမမောမောနှင့် ဦးရန်နိုင်ကိုမှီကာအမောဖြေနေသည်။ဆု ရှင် ဦးပြောလေ မင်းကိုဦးနဲ့နောက် တစ်ယောက်နဲ့နှစ်ယောက်လိုးရင်ရောခံမလားဆု ဦးဆုကိုနှစ်ယောက်ညှပ်ပြီးလိုးချင်တယ် ဘယ်သူနဲ့လဲဦးရဲ့ ဆုကိုဖာခံခိုင်းမလို့လားဟင် ဦးသူငယ်ချင်းနဲ့ပါကွာ သူကဆုကိုတွေ့ထဲကလိုးချင်နေတာ တစ်ယောက်ထဲနော် ဆုလဲနှစ်ယောက်လိုးတာခံကြည့်ချင်တယ် ဦးသူငယ်ချင်းလီးကရော ဦးလောက်ရှိတာလား ဦးလောက်ရှိတာပေါ့ကွ ဦးနဲ့ရွယ်တူပဲ နောက်ပြီးသူ့လီးမှာဂေါ်လီတွေတပ်ထားတယ် ဆုကြိုက်မှာပါ ဂေါ်လီတွေနဲ့ ဆုစောက်ဖုတ်တော့ကွဲတော့မှာပဲ ဟားဟား ဟုတ်ပါပြီကွာ ခုတော့ဖင်ကွဲကောင်လိုးလိုက်ဦးမယ် ဦးရန်နိုင်ကကျမကိုစိတ်ကြိုက်စောင့်လိုးပြီးကျမဖင်ထဲကိုလရည်တွေပန်းထုတ်လိုက်တော့သည်။ ဦရန်နိုင်သူငယ်ချင်းနဲ့နှစ်ယောက်ညှပ်ချမဲ့အဖြစ်ကိုတွေးရင်းကျမရင်တွေအရမ်းခုန်နေသည်။ ထိုနေ့ကိုမြန်မြန်ရောက်ပါစေလို့လဲကြိတ်ဆုတောင်းနေမိတော့သည်။ ခုဆိုရင်ကျမဦးရန်နိုင်ရဲ့အလိုးကို မခံရရင်မနေနိုင်အောင်ဖြစ်နေပြီးဖြစ်သည်။ သို့သော်ကျမယောက်ျားဆေးရုံကဆင်းလျှင်ကျမသူ့နားပဲနေရမည်ဖြစ်သည်။ ကျမသူရဲ့လီးသေးသေးလေးနဲ့လိုးလျှင်လည်းကျမ၏ကာမစိတ်ကိုဖြည်လျော့နိုင်မယ်မဟုတ်ပေ။ ထို့ကြောင်ကျမဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကိုခိုင်ခိုင်မာမာချလိုက်သည်။ ကျမရဲ့ဘဝကိုဦးရန်နိုင်၏ဖာသည်မတစ်ယောက်အဖြစ်သာနေရန်ဖြစ်သည်။
ခုဆိုရင်တော့ကျမရဲ့အရှက်သိက္ခာထက်ကျမအလိုးခံရန်ကိုပဲဂရုစိုက်မတော့သည် ။ဆေးရုံထဲတွင်ကျမစောက်ဖုတ်ထဲကိုဦရန်နိုင်ထည့်ပေးလိုက်သော ကျင်စက်လီးတုကြီးကစောက်ဖုတ်ကိုထိုးမွှေနေသည်။ ကို ပြောလေဆုလေး နေရောကောင်းရဲ့လား ကောင်းပါတယ်ကိုရဲ့ ဆု့ကို့ကိုပြောစရာရှိလို့ နယ်ကဆု့ညီမတို့လင်မယားက ဘုရားဖူးထွက်မှာမို့ အတာဆု့ခဏသွားပြီးအိမ်စောင့်ပေးရမယ် ကိုဆေးရုံဆင်းတာကိုဆုလာမကြိုနိုင်လောက်ဘူး ဟုတ်လားဆုရဲ့ အတာဆိုလဲရပါတယ် ကိုလဲနေကောင်းနေပြီးပဲ ကို့ဘာသာပြန်ခဲ့ပါမယ် ကိုဆေးရုံဆင်းတဲ့ညနေတော့ ဆုပြန်ရောက်မှာပါ စိတ်ချနေနော် ဟုတ်ပါပြီဆုရယ် ကျမစကားကိုထိန်းပြောနေရသည်။ ကျမစောက်ဖုတ်ထဲမှစောက်ရေတွေထွက်ကာစီးကျနေသည်။ ကျမဦးရန်နိုင်လိုးတာကိုလဲခံချင်နေပြီးဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ကို့စီမှမြန်မြန်ပြန်ပြီးဦရန်နိုင် ရုံးခန်းသို့လိုက်သွားတော့သည်။ရုံးခန်းထဲတွင် ဦး ဆုမနေနိုင်တော့ဘူး အရမ်းဆာနေပြီကွာဘယ်လိုလဲဆုရဲ့ ဆုစောက်ဖုတ်က အရမ်းယွနေပြီလားဟုတ်တယ် ဆုစောက်ဖုတ်ထဲကို ဦးလီးကြီးထည့်ပြီးလိုးတာခံချင်ပြီ ဟုတ်ပါပြီဗျာ အတာဆိုလာ ဦးလီးကိုစုပ်ပေးဦး ရုံးခန်းတခါးကိုလဲလော့ချခဲ့ဦးနော် ဟုတ်ကဲ့ ကျမဦးရန်နိုင်ရဲ့ခုံရှေ့တွင်ဒူးထောက်ကာဦးရန်နိုင်ရဲ့လီးကြီးကိုအားရပါးရစုပ်ပေးနေသည်။ ကျမလက်တစ်ဖက်ကလဲစောက်ဖုတ်ထဲကိုနှိက်ကာလီးတုကျင်စက်ကြီးဖြင့်ထိုးကာလိုးနေသည်။ ဦးကကျမခေါင်းကိုလက်နဲ့ကိုင်ကာကျမပါးစပ်ကိုစိတ်တိုင်းကျလိုးနေသည်။ အွင့်..အွင့်…..အွင့်….. အွင့်….အွတ်….အွတ်..စုပ်စမ်းဆုငါ့လီးကြီးကိုစုပ်စမ်း မင်းစောက်ရမ်းကြိုက်တဲ့ ငါ့လီးကိုစုပ်စမ်းကောင်းလားငါ့ဖာသည်မလေးအင့်…အင့်. …. ကျမပါးစပ်ကိုအားရအောင်လိုးပြီးမှ ကျမကိုစားပွဲပေါ်တွင်လက်ထောက်ကုန်းခိုင်းလိုက်သည်။
သူရဲ့လီးတုတ်ကြီးကိုကိုင်ကာကျမဖင်ထဲသို့ထိုးထည့်ကာစောင့်လိုးလိုက်သည် ဦး စောက်ဖုတ်ကအရမ်းယားနေပြီ စောက်ဖုတ်ကိုအရင်လိုးပေးပါ မင်းစောက်ဖုတ်ထဲမှလီးတုကြီးရှိတာပဲ မင်းဖင်ကိုပဲအရင်လိုးမယ် ဦးရယ် စောက်ဖုတ်ကိုလိုးပေးပါဦးရဲ့ဖာသည်မလေးကိုစောက်ဖုတ်ကိုလိုးပေးပါဦးရန်နိုင်ကကျမရဲ့ စိတ်ကိုဆွပေးကာဖင်ကိုပဲဆောင့်ဆောင့်လိုးနေတော့သည်။ ကျမစောက်ဖုတ်ကလဲအရမ်းယွကာစောက်ရည်များ ပင်စီးကျနေတော့သည်။ အား…အာ…. ပြွတ်….ပြွတ်… ပျစ်..ပျစ်… အား.ကောင်းတယ် ဆောင့်ပေး ဆောင့်ပေး ကျမဖင်ကွဲသွားအောင်စောင့်ပေး မင်းယောက်ျားလီးနဲ့ငါ့လီး ဘယ်ဟာပိုကြိုက်လဲဆုဦးလီးကိုပိုကြိုက်လို့အမြဲခံနေတာပေါ့ လိုးပေး ဆောင့်လိုးပေးဆု မင်းစိတ်တိုင်းကျ ငါ့ပေါ်ကနေနေပြီးမင်းရဲ့ယွနေတဲ့စောက်ဖုတ်နဲ့ဆောင့်လိုး လာ ဟုတ် ကျမဦးရန်နိုင်ရဲ့လီးကြီးကိုကိုင်ကာ ကျမစောက်ဖုတ်ထဲကိုတေ့သွင်းလိုက်သည်။ ကျမအရမ်းဆာနေသောလီးကြီးဝင်လာသောကြောင့် ကျမကြက်သီးများပင်ထသွားအောင်ကောင်းနေသည်။
အား…..အာ… ကောင်းတယ် ဦး အား..အား…ဦး ဆု့နို့တွေကိုစိုပေးပြွတ်..ပြွတ်.. ဗြစ်…..ဗြစ်… အား…အွင့်….အွင့်…. ကောင်းလိုက်တာ ဦးရယ်ကျမဖင်ထဲကိုလက်နဲ့လိုးပေးပါဦး ကျမနဲ့ဦးရုံးခန်းထဲတွင်ထင်တိုင်းကြဲနေကြသည်။ လီးနဲ့စောက်ဖုတ်ရိုက်သံများကလဲတခန်းလုံးဆူညံနေတော့သည်။ ကျမတို့နှစ်ယောက်တစ်ချီပြီးတစ်ချီလိုးလိုက်ကြသည်။ ညမှောင်မှရုံးမှပြန်ကာအိမ်ရောက်သည်နှင့်ဆက်လိုးခဲ့ကြသည် ။နောက်နေ့မနက်တွင်ဦးသူငယ်ချင်းဆိုသူရောက်လာသည်။ သူ့နာမည်ကဦးရဲထက်ဦးရဲထက်ရောက်သည်နှင့် ဦးကကျမတို့ကိုမိတ်ဆက်ပေးသည်။ ဦးရဲထက်ကတော့ကျမကိုတွေ့ဖူးသည်ဟုဆိုသည်။ ကျမကိုလိုးမည့်သူနှင့်မိတ်ဆက်ရတော့ကျမနဲနဲတော့ရှက်မိသည်။ သိုသော်ကျမအလိုးခံရမည်ဆိုလို ကျမဘာမဆိုလုပ်ဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီဖြစ်သည်။ ဦးရန်နိုင်ကအရက်နှင့်အမြည်းများ သွားဝယ်မည်ဟုပြောကာထွက်သွားသည်။ ဦးထွက်သွားသည်မှမကြာသေး ကျမတို့နှစ်ယောက်လုံးတွင်အဝတ်စားများကင်းမဲ့ကာအနမ်းကြမ်းများဖြင့်မိတ်ဆက်နေကြပြီးဖြစ်သည်။ ဦးရဲထက်ကကျမနှုတ်ခမ်းကိုနမ်းနေရင်ကျမ၏နို့များကိုစုပ်နယ်နေသည်။ သူ့ပေါင်ကြားမှဂေါ်လီတွေနှင့်လီးကြီးကလဲကျမရင်တွေကိုတဒိန်းဒိန်းခုန်နေစေသည်။ ဦးရဲထက်လီးကြီးကိုကိုင်ပြီးကျမဂွင်းထုပေးလိုက်သည်။
ဦးရဲထက်ကလဲကျမဖောက်ဖုတ်ထဲကိုလက်ချောင်းနှစ်ချောင်းထိုးထည့်ကာကျမကိုဆွပေးနေသည်။ ထိုနောက်ဦးရဲထက်လီးကြီးကိုကျမတြွတ်ြွတ်မြည်အောင်စုပ်ပေးလိုက်သည် ။ဂေါ်လီတွေနှင့်မို့ဦးလီးလောက်စုပ်မကောင်။ ဦးရဲ့ထက်လီးကြီးသည်ကျမရဲ့စုပ်ပေးဒဏ်ကိုမခံနိုင်ပဲညည်းနေသည်။ ကျမဦးရဲထက်လီးကြီးကိုပြီးအောင်ထိစုပ်ပေးလိုက်သည်။ ထိုနောက်ဦးရဲထက်ကလဲကျမ၏စောက်ဖုတ်ကို သူ့လျှာစွမ်းပြတော့သည်။ အား..အား..ကောင်းလိုက်တာဦးရယ်အစီလေးကိုစုပ်ပေးပါဦးအား… အရမ်းကောင်းတယ်ဦးရဲထက်ကလျှာကလေး ထိုး၍ ထိုး၍ အမျိုးမျိုးအဖုံဖုံယက်ဆွ ပေးသည်။ဦးရဲ့၏ဆွပေးချက်ကြောင့်ကျမပြီးချင်သလိုလို ဖြစ်သွားသည်။ဦးရယ် စေါက်ဖုတ်ကိုဖြဲပြီးလိုးပေးပါ ဒီနေ့ တဝကြီးလိုး အသေ လိုး ဂေါ်လီကြီးတွေနဲ့ခံချင်လှပြီး ကျမအရမ်းအလိုးခံချင်နေပြီဖြစ်သောကြောင့် လိုးပေးရန်တောင်းဆိုလိုက်သည်။ ဦးရဲထက်ကလဲလီးကြီးကိုကိုင်ကာလိုးရန်ဟန်ပြင်လိုက်သည်။်ဗြစ်……ဗြစ်……ဦးရဲထက်က သူ၏ဂေါ်လီးလီးကြီးတွေနှင့်ကျမစောက်ဖုတ်ထကြိုထိုးထည့်လိုက်သည် ။ဂေါ်လီတွေကကျမစောက်ဖုတ်နံရံတွေကိုတိုက်စားပြီးဝင်လာသည်။ ကျမလည်းအရမ်းကောင်းလွန်းသောကြောင့်ဦးရဲထက်လီးကြီးကိုညစ်ပေးလိုက်သည်။
အား…..အား….အင့်….ကောင်းလိုက်တာဦးရယ် ကျမကိုမညှာနဲ့ ဆောင့်လိုးပေးလိုးပေးမှာပေါ့ဆုရဲ့ မင်းဒိလောက်ထန်လိမ့်မယ်လို့မထင်ဘူး မင်းကဖာသည်မထက်တောင်ထန်နေပါလားကွ အား.အား…..သူ့ရဲ့ဂေါ်လီတွေကကျမစောက်စီလေးကိုတိုက်တိုက်ပြီးဝင်ထွက်နေသည်။ ကျမစောက်ဖုတ်ထဲမှလဲစောက်ရေတွေစိုရွှဲနေသည်။ ဦးရဲထက်လီးကြီးတွင်စောက်ရေတွေနှင့်စိုရွှဲနေသည်။ အခန်းထဲတွင်လီးဝင်ထွက်သံတွေနှင့်ရမက်သန်တွေလွှမ်းနေတော့သည်။ အား…ြွဗွတ်…ဗြွတ်…ပြွတ်…ပြွတ်…အွင့်…. အွင့်ဦးရဲထက်လိုးရင်းကျမနှုတ်ခမ်းကိုနမ်းနေသည်။ ဦးရဲထက်ရဲ့ဂေါ်လီလီးကြီးကိုကျမပိုးဆိုးပတ်စက်ခံနေရသည်။ ကျမစောက်ဖုတ်ထဲမှ လဲစောက်ရေတွေထွက်ကတချီပြီးသွားသည်။ ဗြွတ်….ဗြွတ်….ဘယ်လိုလဲဆုရဲ့ ဦးသူငယ်ချင်းလီးကြီးကိုကြိုက်နေပြီလား ဂေါ်လီတွေနဲ့ခံရတာကောင်းနေပြီလားဦးအပြင်ကပြန်ရောက်ကာ ကျမတို့နှစ်ယောက်လိုးနေတာကိုကြည့်နေသည်။ ထိုနောက်ဦးကလဲဘောင်းဘီချွတ်ကာလီးကြီးကို ကျမပါးစပ်နားသို့ကပ်ပေးသည် ။ဂေါ်လီလီးနဲ့အလိုးခံရင်း ဦးလီးကိုလည်းစုပ်ပေးပါဦး ဦးရဲထက်ကကျမကိုဆွဲထူပြီးကုန်းခိုင်းလိုက်သည်။
ကျမလဲဦးရဲ့လီးကိုစုပ်ပေးရင်းကုန်းပေးထားလိုက်သည်။ပြွတ်…….ပြွတ်…… အွင့်..အွင့် ဗြွတ်……ဗြွတ်…….ဦးကကျမခေါင်းကိုကိုင်းကာလီးကြီးကို အဆုံးထိရောက်အောင်ထိုးထည့်လိုက်သည်။ လီးကြီးသည်ကျမလည်ခေါင်းထဲထိရောက်သွားသည်။ ကျမအသက်ရှုကိုပင်မရတော့ပဲဦဖြစ်သွားသည်။ ကောင်းလိုက်တာဆုရယ် မင်းကခုဆိုစုပ်တာတွေတောင်အရမ်းတော်နေပြီပဲ ဦးသင်ပေးထားတာလေ ကျွမ်းမှာပေါ့ ဦးရဲထက် ပလက်လှန်လိုက်နော် ကျမတတ်စောင့်ပေးမယ်ဦးကကျမဖင်ကိုလိုးပေး ညှပ်ချတာခံချင်လှပြီအား…..အား…….ခုမှလီးနှစ်ချောင်းစခံတာမို့ ဖြည်းဖြည်းလုပ်နော် ဆု ဖင်ကိုလက်နဲ့ဖြဲထားပေး ဖင်ကိုဂျယ်မသုံးပဲလိုးမယ်အား……အား..ကောင်းလိုက်တာရှင် ဦးတို့လီးကြီးတွေကိုခိုက်နေပြီတကယ်စံချိန်မှီပဲ ဦးရဲထက်ကအောက်မှနေပြီးပင့်ဆောင့်ပေးသည်။ ဦးကလဲကျမဖကိုကိုကိုင်ကာဆောင့်ဆောင့်လိုးနေသည်။ ကျမရဲ့နို့တွေကိုဦးရဲထက်ကစို့နေသည် ။ဂေါ်လီလီးကြီးဏ်ကိုမခံနိုင်ပဲ ကျမစောက်ဖုတ်မှစောက်ရေများ ထွက်ပြီးပြီးသွားသည်။ ဦးရဲ့ဆောင့်ချက်တွေကလပြင်းထန်လှသည်။ဆု ဘယ်လိုလဲ လီးနှစ်ခေါင်းနဲ့ခံရတာ အရမ်းကောင်းတယ်ဦးရယ် အမြဲတမ်းလိုးပေးနော် ဆုစောက်ဖုတ်နဲ့ဖင်က ဦးတို့စိတ်တိုင်းကျလိုးဖို့ပါ ကျမကိုပြိုင်တူဆောင့်လိုးကြသည်။ ကျတို့သုံးယောက်လိုးသံတွေအပြင်ကတောင်ကြားရလောက်သည်။
အခန်းထဲတွင်စောက်ဖုတ်နဲ့ဖင်လိုးသံတွေအပြိုင်ကြဲနေသည်။ ကျမဖင်ရောစောက်ဖုတ်ရောပြဲကွပြီးကျိန်းစပ်နေသည်။ ဒါပေမဲ့ကျမကာမစိတ်ကပြောက်မသွားပဲအလိုးခံချင်နေတုန်းဖြစ်သည်။ ကျမခုဆိုဖာသည်မထက်ပင်ရမက်ထန်နေပြီဖြစ်သည်။ ကို့စီကိုပြန်ရင် ကျမစောက်ဖုတ်နဲ့ဖင်စက်နေလောက်ပြီဟုထင်မိသည်။ ကိုရယ်ခွင့်လွတ်ပါတော့ ကိုအတွက်ဆုလုပ်ခဲ့တာပါ ဒါပေမဲ့ဆုရဲ့ကာမစိတ်တွေက ဦးနဲ့တွေမှပွင့်သွားခဲ့ပြီး ဦးလိုးတာပဲအမြဲခံချင်နေပြီကိုရယ် ဆုကိုခွင့်လွတ်ပါနော်ကျွန်တော်စာအုပ်ကိုချပြီးအရမ်းတောင့်တင်းနေပြီးဖြစ်သော လီးကိုကိုင်ကာဆုအလိုးခံနေပုံများကိုပုံဖော်ရင်းဂွင်းထုနေမိသည် ။ပြန်လာလျှင်ဆုစောက်ဖုတ်ကြီးမှာပြဲ လန်နေမှာကိုတွေးရင်လီး ကိုကိုင်းကာခပ်ကြမ်းကြမ်းပင်ထုနေမိတော့သည်။ ဆုကျွန်တော်ကွယ်ရာမှာဖောက်ပြန်နေတာကိုကျွန်တော်သာယာမိနေသည်။ ဆုစောက်ဖုတ်ကိုတခြားလူတွေပိုးစိုးပတ်ဆက်လိုးတာကိုကြည့်ချင်နေမိသည်။ ထိုးအကြောင်းကိုတွေးရင်ကျွန်တော်ထုလိုက်တော့သည်။ ငါးမီနစ်လောက်ပင်မကြာလိုက်ပါ ကျွန်တော်လီးထဲမှလရည်တွေပန်းထွက်သွားတော့သည်။ ကျွန်တော်ဆုစီကိုဖုန်းထပ်၍ခေါ်လိုက်သည် ဆိုလျှင်ပဲအား….အား…. ကောင်းတယ်ဦးရယ်ကျမစောက်ဖုတ်ကိုလိုးပါဦးစိုးကဆုဖင်ကိုလိုးပေး ဦးမြင့်လီးကြီးကိုစုပ်ချင်တယ်အား… အွင်း… အွင်း . … ကျွန်တော်ဖုန်းထဲမှထွက်လာသောအသံများကိုကြားပြီး ခုလေးတင်ပြီးသွားသောလီးကပြန်၍တောင်လာသည်။ တစ်ဖက်မှဆုအလိုးခံနေသောအသံ ကိုနားထောင်ရင်းကျွန်တော်ထက်၍ဂွင်းထုနေမိတော့သည်။ ပြီး